Aubameyang Iyo Lacazette Oo Guul Muhiim Ah Ka Saaciday Arsenal %
Aubameyang Iyo Lacazette Oo Guul Muhiim Ah Ka Saaciday Arsenal
Weerar yahanka heerka caalami ee qaranka Gabon, wiilka lagu magacaabo Pierre-Emerick Aubameyang, ayaa wuxuu dhaliyay labo gool oo kamid ah saddex gool ee qura kaasoo waliba labo kamid ah uu ahaa Rigoore, islamarkaana ay heshay kulankii ay garaaceen Stoke.
Goolka rigoorada ahaa ee xidigii hore ee Dortmund oo yimid qeybtii labaad maadaama bogii hore lagu kala baxay Bareejo goolal la’aan ah ayaa wuxuu dhashay daqiiqadii 75aad ee qeybta labaad, waxaana qaladka Gool-ku-laadka lagu galay Ozil.
Sidoo kale, goolka labaad ee Aubameyang, oo isana yimid qeybta labaad ayaa wuxuu dhaliyay daqiiqadii 86aad, ayaa wuxuu ahaa mid ka yimid Laad uu soo ganay laacibka lagu magacaabo Ozil, islamarkaana uu ahaa Koorno ama Gees ka laad.
Goolka saddexaad ayaa waxay Arsenal ay uga mahad-naqeysaa kaasoo ahaa Rigoore ciyaaryahanka lagu magacaabo Alexandre Lacazette, kaasoo dhaiyay goolkiisa daqiiqadii 89aad ee qeybta labaad waxaana xusid mudan inuu wiilkaan bedal kusoo galay.
Guushaan ayaa waxay Arsenal ay siineysaa inay kusoo dhawaato dhigeeda Chelsea, taasoo hada fadhisa booska Shanaad, xili Gunners-ka ay Jiifto kaalinta Lixaad iyadoona leh 51 dhibcood, marka lagu daro sadexdii dhibcood oo ay ka heshay Stoke.
Inta kulankaan uu socday ma jirin wax ciyaaryahan, kaasoo la siiyay Kaarka gaduudan waxayna ka dhigan tahay in ciyaartu ay ahayd mid xasiloon, laakiin waxaa ka bixiyay Kaarar Jaalo ah, kuwaasoo saddex ahaa: Hal Arsenal ah iyo Labo oo Stoke.
Arsenal ayaa waxay ahayd mid gacanta sare ee kulanka la lahayd, iyadoona kubad-haysashada uga fiicneed dhigeeda Stoke City waxayna haysatay 70 boqolkiiba, halka Stoke ay haysatay Banooniga 30 boqolkiiba, taasoo hoos udhac weyn ah.
Arsenal vs StokeAubameyangLacazettePremier League